Kungani kufanele uthenge Huamachinery inkampani?
Ngenxa yokuthi ungumuntu okungaphezu nje efektri. Umgomo wethu ukuqinisekisa ukuthi zonke ikhasimende 100% anelisekile ukuthenga kwabo futhi yezitolo nesipiliyoni. Uma unganelisekile ngokuphelele, sizobe aphendule ukukhathazeka kwakho khona manjalo.
Kuthiwani uma kukhona inkinga nge nto yami?
Sine yesiqinisekiso lonyaka owodwa, Mahhala esikhundleni izingxenye ngenxa yenkinga izinga Sesikhathele futhi uyakujabulela ukusamukela uma ubuyela lwezinto isimo esisha. Iwaranti yethu lisebenza lomthengi yokuqala umshini kuphela.
Ngemva unquma ukuthenga, sizokuthumela i-invoice ye-proforma ngolwazi ebhange yethu, ukuletha lokhu PI ebhange, futhi ucele ukwenza T / T idiphozi. Ukuze isethi eyodwa, umshini wakho kungaba inikelwe zingakapheli izinsuku 5 emva thina kokuthola idiphozi, sizokuthumela echwebeni futhi ukuletha kuwe olwandle.
icala Ngeminye ukuze iphatheke amacala ngaphezulu, ungadlulisa 100% yokukhokha, singakwazi hlela imikhiqizo nokuthunyelwa ngaphansi isabelo sakho
-Uma namanje abaqondi, sicela musa hestitate ukubuza kimi
Ngingaba oda 1 simiselwe isampula?
eyamukelekayo Yes.Sample, Ungakwazi sokuhlola ubunjalo balabo isampula.